Frenkie de Jong oo balan qaad u sameeyay Lionel Messi, kahor imaatinkiisa kooxda Barcelona – Gool FM
Frenkie de Jong oo balan qaad u sameeyay Lionel Messi, kahor imaatinkiisa kooxda Barcelona
(Yurub) 16 Maajo 2019. Laacibka heerka caalami dalka Netherland ee Frenkie de Jong ayaa balan qaad u sameeyay Lionel Messi, kahor inta uusan markii ugu horeysay xiranin maaliyada kooxda Barcelona xili ciyaareedka soo socda.
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo saxiixatay laacibka khadka dhexe ee Ajax, Frenkie de Jong waxaana ay kaga adkaatay naadiga PSG ee dalka Faransiiska oo si weyn u doonaysay saxiixa laacibkan da’ada yar.
Hadaba Frenkie de Jong ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu kaga hadlay dareenkiisa, kahor imaatinkiisa kooxda Barcelona ee xili ciyaareedka soo socda.
“Waxaan heystaa riyo cajiib ee ah inaan arko Lionel Messi iyo sida uu u ciyaarayo isaga, waxaan siin doonaa baasas badan xilli ciyaareedka soo socda”.
“Waxaan u xiisi doonaa horyaalka dalka Holand, wax walba ee halkan waxay ahaayeen cajiib, wax walba waxay ku socdeen si dhaqsi leh tan iyo markii aan ka mid noqday kooxda koowaad”.
“Ma badali doono qaab ciyaareedkeyga, waxba igama quseeyaan xitaa hadii ay dhacdo in tooshka la’igu ifiyo iyo hadii kale, waan ku faraxsanahay inaan barto waxyaabo cusub”.
Rivaldo oo rajeynaya in Guardiola uu ku laabto Barcelona xagaagan, muxuuse ka yiri suurtagalnimada uu Hazard ugu biiri karo Real Madrid??